BerryWM, Blackbox, BSPWM, Byobu na Compiz: WM ọzọ 5 maka Linux | Site na Linux
Continuga n'ihu n'usoro akwụkwọ anyị na Njikwa Window (Ndị njikwa Windows - WM, na Bekee), taa anyị ga-aga n'ihu na nke anyị nke abụọ banyere WM, ebe anyị ga-atụle esote 5 nke ha, site na ndepụta anyị 50 dị.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgụ nke anyị gara aga metụtara post na mbụ 5 WM enyocha, ndị ọzọ nwere ike ịpịrị njikọ.
1.3 igbe ojii
“Ọ bụ a anụ obere window njikwa e dere C maka unix usoro".
A na-achịkwa ya site na onye ahịa akara akara dị ike, nke na-enye ndị ọrụ ohere ịchịkwa windo site na daemon hotkey dị ka "sxhkd" ma ọ bụ ịgbatị ụfọdụ arụmọrụ site na edemede shei.
O nwere obere koodu ntinye kacha mfe, juputara na nhọrọ igbanwe ma mepee mputa nke windo, na akuku nke metụtara oke, ogwe aha na ederede nke mpio.
Ọ na - enye gị ohere itinye windo ọhụrụ na oghere ndị mmadụ na - anọghị na ya, ọ na - ejikwa isi nke desktọọpụ kwalite asụsụ ọma nke ọma.
“A ndụdụ nke mbụ BlackBoxWM CVS na kwadoro na Sourceforge, mgbe nke a na-nọ na-kwadoro na GitHub. Na mgbakwunye, ọ gụnyere mgbanwe niile emere na ebe nchekwa Blackbox CVS, yana patches anakọtara site na pdl-linux, Debian, ndepụta ahụhụ Blackbox, na ndụdụ ndị ọzọ sitere na GitHub. Ọ gụnyekwara nnabata EWMH / ICCCM.".
Ọrụ ngo: Emechara nchọpụta ihe dị ka ọnwa isii.
Ihe ndozi windo gụnyere ókèala na ogwe aha. Na mgbakwunye, ogwe aha nwere akara ngosi ma belata, bulie, ma mechie bọtịnụ.
Edere ya na C ++, ọ nwere obere koodu nwere ọrụ arụnyere maka ịsụgharị ihe siri ike, gradients na bevels. Na mgbakwunye, ọ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, na-eweta menu dị mfe na nkwado maka ọtụtụ desktọọpụ.
Ọ nwere akara ngosi "ụzọ mkpirisi" na desktọọpụ, ọ nwere ike belata ọrụ / windo n'ime akara ngosi yana ọ na-etinye nkwado maka isiokwu na agba agba.
WM emelitere a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha blackbox ngwugwuYa mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ.
"Ma ọ bụn WM nke na-anọchi anya windo dị ka akwụkwọ nke osisi binari zuru ezu. Naanị ya na-aza ihe omume X Windows, ozi ndị ọ na-enweta na-aga na ntọala raara onwe ya nye. Ọ na - arụkọ ọrụ yana mmemme akpọrọ "bspc" na - ahụ maka ide ozi na oghere bspwm. Ezie na bspwm anaghị ejikwa keyboard ma ọ bụ pointer input, yabụ na ịchọrọ mmemme nke atọ (dịka sxhkd) ịsụgharị kiiboodu na ihe omume pointer na bspc arịrịọ.".
Ọrụ ngo: Achọpụtara ihe ikpeazụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị 8 gara aga.
Tipo: Di omimi
Ọ na-arụ ọrụ site na mfe ịgụ na configurable nhazi faịlụ site na sxhkdrc na bspwmrc.
Edere ya n'asụsụ C ma nweta ya ikikere site na FreeBSD. Ọ na-akwado usoro iwu RandR na Xinerama na ụkpụrụ EWMH na ICCCM.
WM emelitere a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha ngwugwu "bspwm"Ya mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ.
“Onye na-emeghe ọnụ ọnụ multiplexer na windo njikwa n'okpuru ikike GPLv3. Emere ya na mbụ iji nye nkwalite mara mma na akụkụ ọrụ, akụkụ dị mfe na nke bara uru nke GNU Screen, maka nkesa Ubuntu.".
Ọ gụnyere profaịlụ dị mma, ụzọ mkpirisi keyboard dabara adaba, yana ngwa ọrụ nhazi.
Arụ ọrụ na ọtụtụ Linux, BSD na Mac nkesa, mgbe pỌ na-enye ụzọ bara uru iji tinye mgbakwunye arụmọrụ na windo njedebe ọkọlọtọ.
Na-ebido njikwa faili windo ederede (ma ọ bụ ihuenyo ma ọ bụ tmux) nke na-eme ka ọ dị mfe ịlele ozi na ọkwa ọkwa usoro n'ime ahịrị abụọ na ala nke nnọkọ ihuenyo. Ọ na-enyekwa ohere ngwụsị ya na ọtụtụ taabụ, enwere ike ịnweta ya site na igodo dị mfe.
WM emelitere a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha ngwugwu «byobu»Ya mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ.
"Onye njikwa ihe mepere emepe OpenGL nke na-eji "GLX_EXT_texture_from_pixmap" were jikọta windo dị larịị ebugharị ka ọ bụrụ ihe ederede. Ọ nwere sistemụ na-agbanwe agbanwe yana ezubere iji rụọ ọrụ nke ọma n'ọtụtụ ngwaike eserese kọmputa. O nwekwara ike ịrụ ọrụ dị ka njikwa windo, iji bulie njikwa nke ngwa desktọọpụ, ikwe ka ịkwaga ma ọ bụ gbanwee ogo windo ahụ, gbanwee ebe ọrụ, gbanwee windo ahụ n'ụzọ dị mfe (iji alt-tab ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ), n'etiti ihe ndi ozo".
Ọrụ ngo: Achọpụtara ọrụ ikpeazụ n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa 9 gara aga.
Ọ bụ nsonaazụ nke njikọta nke ngalaba niile nke mbụ Compiz nke malitere na Novell nke David Reveman, Beryl, Compiz-Fusion na ndị ọzọ kere tupu. Compiz malitere na Novell dị ka ihe mgbakwunye na ihe nkesa ngosi XGL ugbu a. Ọ bụ ezie na a na-enye Compiz-Fusion ugbu a dị ka Compiz tinye.
Ọ na-enye ngwanrọ ngwangwa njikwa windo na desktọọpụ desktọọpụ site na OpenGL, na-eji ụzọ ntụgharị dị ka AIGLX, Xgl, yana ụzọ ntụgharị nsụgharị na ngwaike ụfọdụ.
Ọ nwere usoro nhazi siri ike ma na-arụ ọrụ. Ọ nwere ngwa mgbakwunye dị ike ma na-agbanwe agbanwe, nke na-enye ohere ịnweta ohere ndọtị na-akparaghị ókè. Na mgbakwunye, ọ nwere nnukwu obodo nke ndị mmepe na ndị ọrụ na-azụlite, nwalee ma jiri plugins ndị akọwapụtara.
WM emelitere a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha compiz ngwugwuYa mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ndị a na-esote 5 «Gestores de Ventanas», n'adabereghị na nke ọ bụla «Entorno de Escritorio», akpọ BerryWM, Blackbox, BSPWM, Byobu na Compiz, nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » BerryWM, Blackbox, BSPWM, Byobu na Compiz: WM ndị ọzọ maka Linux